Tetsy amin’ny “petite salle” etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina izy ireo no tazana nanao fanazarantena omaly alarobia 03 aprily 2019. Nambaran’ireto mpanazatra ireto fa mbola misy 30 andro no tavela amin’ny fampivondronana voalohany natrehan’izy ireo efa ho 2 herinandro katroka izao. Mbola hisy ny fampivondronana faharoa haharitra 45 andro hatrehan-dry zareo manomboka amin’ny 1 jona izao mialoha ny hiaingana ho any Maorisy. Mahatratra 20 ireo mpilalao basikety vehivavy nantsoina hiatrika an’ity fampivondronana ity : 8 avy amin’ny Mb2All, 6 avy amin’ny Bbc, 2 Fandrefiala, 2 Jsa, 1Jea ary 1 Ascut. 12 amin’izy ireo no hotazomina farany ho any Maorisy any amin’ny faramparan’ny fampivondronana faharoa. Ny nataonay aloha tamin’ity fampivondronana voalohany ity dia nandrindra ny fiarahan’ireto mpilalao ireto izay hita fa tanora matanjaka avokoa ka mora mifandray tsara fa ny resaka teknika sy traikefa no hanampiana azy ireo kely.